गल्कोटमा जग्गा अभावले बसपार्क बनेन्::Online News Portal from State No. 4
गल्कोटमा जग्गा अभावले बसपार्क बनेन्
बागलुङ, १ फागुन – जग्गा अभावमा गलकोट नगरपालिकामा बसपार्क बनाउन सकिएको छैन । बसपार्क अभावमा सडकमै पार्किङ गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग सँगैको गलकोट नगरपालिकामा बढ्दो सवारी चाप धान्न पार्क नभएपछि स्थानीयले समेत सास्ती खेपेका छन् । नगरपालिकाको मुख्य केन्द्र रहेको हटिया बजारमा सार्वजनिक वा खरिद गर्ने जमिन समेत नपाएर बसपार्क बनाउन नसकिएको गलकोट नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष बिरजंग भण्डारीले बताए । सडकमै दोहोरो पार्किङले यात्रीले समेत सास्ती खेपेका छन् । ‘हामीले धेरै ठाउँमा जग्गा हेरिसकेका छौं, भनेजस्तो पाएका छैनौं’ भण्डारीले भने, ‘ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बजेट बिनियोजन गर्न तयार छौं, जग्गाको समस्या परेको छ ।’
उनले खाल्डेखोलामा अस्थायी पार्क बनाउने तयारी भएको बताए । मुख्य बजारभित्रै लस्करै राखिने ट्याक्सी तथा लामो दुरीका लागि हिँडेका बस र जिपको पार्किङले व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख शुकबहादुर बिकले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर गुड्ने सबै सवारीले हटिया बजारमा रोक्ने गर्छन् । यात्री चढाउने र ओराल्नेबाहेक काउण्टर समेत राखिएको छ । हटियाबट नगरभित्रका ११ वटै वडामा छुट्ने बस, जिप र ट्याक्सीले सडकमै पार्क गर्छन् । पार्किङ गर्ने ठाउँ देखाउन नसक्दा जरिवाना समेत गराउन नसकिएको बिकले गुनासो गरे । ‘भएकालाई कहिले पुरानो बजार कहिले नयाँ बजारमा पठाएर खाली गरेझै गर्छौ’ बिकले भने, ‘स्थायी व्यवस्थापन नभएपछि के भनेर जरिवाना गर्ने ?’ नगरपालिकाले जग्गा व्यबस्थापन गरिदियो भने अनिवार्य पार्किङमा कडाई गर्ने उनले बताए । नगरपालिकाले हरिचौर, हटिया र आसपासको क्षेत्रमा जग्गा खोजी गरिरहेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउ भएकोले अधिकांस जमिन घडेरीको रुपमा बिक्री भैरहेको छ । हटिया बजारमै गलकोट मावि र गलकोट बहुमुखी क्याम्पस समेत छ । नजिकै स्वास्थ्य केन्द्र रहेकोले दैनिक आउने बिरामी र बिद्यार्थीको चापले बजार अस्तव्यस्त हुने गरेको हो । बढ्दो बजार भएकोले घर बन्ने क्रम र निर्माण सामाग्रीको जथाभावी भण्डारनले झनै ट्राफिक व्यवस्थामा असर परेको हो । हरिचौर र नगरपालिकाको कार्यालयतर्फ जाने सडकको गौंदी खोलामा बर्षौदेखि निर्माणाधिन पुल समेत बनिनसक्दा सबै गाडी शिवालयचोक नजिकै पार्किङ गरिन्छ । साँघुरा गल्ली भएकोले पुरानो बजारका लागि ल्याइएका खाद्यान्न लगायतका सामाग्री पनि मुख्य सडकमै ‘लोड अनलोड’ गरिंदा बजार साँघुरिएको स्थानीय मनबहादुर खत्रीले बताए । गलकोटमा दैनिक ५० बढी ट्याक्सी, एक सय जिप र दर्जनबढी बस नियमित चल्छन् ।
ती सबै सवारी साधन सडक छेउमै पार्किङ गरिएको हो । ट्रक, ट्रयाक्टरसहित निर्माण सामाग्री ओसार्ने सवारी पनि हटियाकै मुख्य सडकमा यत्रतत्र रोकिरहेको भेटिन्छ । सडक समेत साँघुरो भएपछि नगरपालिकाले सडकको मापदण्ड बनाएर फराकिलो बनाउन पनि थालेको छ । कतिपय सडक चौडा पार्ने क्रममा मुद्दा समेत परेर काममा ढिलाई भएको नगर प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले बताए । बजारभित्र बिजुलीको तार हटाउने अभियान पनि शुरु भैसकेको छ । ‘नाङगा तार हटाएर व्यवस्थित बनाउन खोजेका छौं’ उपप्रमुख रेणुका काउचाले भनिन्, ‘सडक बत्ती र भित्री गल्ली सुधारको ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।